Waa Kuma Xidigii Hore Ee Barcelona Ee Virgil Van Dijk U Rajaynaya Abaal Marinta Ballon d’Or Ee Lionel Messi Aan La Doonaynin? - Gool24.Net
Waa Kuma Xidigii Hore Ee Barcelona Ee Virgil Van Dijk U Rajaynaya Abaal Marinta Ballon d’Or Ee Lionel Messi Aan La Doonaynin?
Cida ku guulaysan doonta abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or ayay haddaba dood wayni ka taagan tahay iyada oo rajada ay Cristaino Ronaldo iyo Lionel Messi ugu guulaysan karaan ay yaraatay.
Kadib markii ay Liverool ku guulaysatay koobka UEFA Champions league waxaa xidigaha ugu cad cad ee ku guulaysan kara Ballon d’Or ka mid noqday difaaca Liverpool ee Virgil Van Dijk si la mid ah gool dhaliyaasha kooxdiisa ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane.
Lionel Messi ayaa wali ka mid ah ciyaartoyda safka hore kaga jira ee abaal marintan ku guulaysan kara laakiin xidigii hore ee kooxda Barcelona ahna macalinka xulka qaranka Netherlands ee Ronald Koeman ayaa Virgil Van Dijk ku taageeray in uu ku guulaysto Ballon d’Or.
Ronald Koeman oo lagu darayay liiska tababarayasha Valverde ka badali kara Barcelona ayaa aaminsan in Van Dijk uu u qalmo in uu abaal marinta Ballon d’Or hanto.
Xidigii hore ee Barcelona ee Ronald Koeman ayaa aaminsan in xidiga xulkiisa Holland ee Virgil Van Dijk in uu sanadakn u qalmo in uu ku guulaysto abaal marinta xidiga aduunka ee Ballon d’Or.
Van Dijk ayaa xili ciyaareedkan ku dhamaystay isaga oo aan hal ciyaartoy gambsi ku samayn tartamada Premier League iyo Champions League waana xidiga kaliya ee rekoodhkan loo diwaan galiyay.
Ronald Koeman oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Van Dijk waxa uu u qalmaa in uu ku guulaysto Ballon d’Or” wuxuuna hadalkan sheegay ka hor kulanka semi Finalka ee UEFA Nations league.
Ronald Koeman ayaa hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Caadiyan waxaa loo gacan galiyaa ciyaartoyga sameeya ama abuura goolasha wax go’aamiya, laakiin haddii uu waligeed jiro waqti difaac iyada lagu siinayaa, hadda ayay tahay”.
Van Dijk oo kadib guushii Champions League wax laga waydiiyay abaal marinta Ballon d’Or ayaa sheegay in Lionel Messi uu yahay xidiga aduunka ugu fiican isla markaana uu u qalmo in uu ku guulaysto balse waxa uu sheegay in haddii uu isagu ku guulaysto uu qaadan doono inkasta oo aanu ka fikirayn.